NEB कक्षा ११ को नतिजा २०७६ कसरी हेर्ने? | Bulk SMS Service Provider Nepal
Home/Blog-news/NEB कक्षा ११...
कक्षा ११ परीक्षामा उपस्थित सबै ५०८,४९४ विद्यार्थीहरूको लागि आफ्नो नतिजा हेर्ने प्रतीक्षाको घडी लगभग नजिकिदै छ। स्रोतका अनुसार “राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड” (Nepal Examination Board, NEB), सनोठिमी, भक्तपुरले आगामी हप्तामा नियमित र आंशिक दुवै पक्षका सबै संकाय (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा) को लागी NEB कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशित गर्दैछ। यसको मतलब तपाईको परीक्षा नतिजाहरू पाउने डरलाग्दो समय केवल कुनामा छ—केहि हप्ताहरू मात्र।
तर प्रश्न हो,
NEB कक्षा ११ नतिजा २०७६ कसरी हेर्ने?
नआत्तिनु होस, यो धेरै सरल र सजिलो छ। एकपटक NEB ले नतिजा प्रकाशित गरे पछि तपाईले आफ्नो NEB परीक्षा नतिजा २०७५/७६ आकाश एसएमएस (Aakash SMS) मार्फत चेक गर्न सक्नुहुनेछ। जुन संकाय भएपनी (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी,वा शिक्षा), आकाश एसएमएसले तपाईको मोबाइल फोनमा सीधा परीक्षा नतिजा ल्याउँदछ। यो तपाइँको लागि फाइदाजनक छ यदि तपाइँसँग इन्टरनेट (internet) छैन वा तपाइँलाई इन्टरनेट को उपयोग गर्ने तरीका थाहा छैन।
अब NEB कक्षा ११ नतिजाहरू सिधा तपाईंको फोनमा
आकाश एसएमएस को माध्यम बाट तपाईको NEB (HSEB) कक्षा ११ २०७६ नतिजा हेर्न, केवल निम्न चरणहरु पालना गर्नुहोस्:
१. तपाईंको मोबाइलको सन्देश बक्स (Message Box) मा जानुहोस्
२. नयाँ सन्देश (New Message) लेख्नुहोस्
३. त्यसमा NEB <SPACE> प्रतीक नम्बर (Symbol Number) लेख्नुहोस
४. ३१००३ मा एसएमएस (SMS) पठाउनुहोस्
उदाहरण: यदि तपाईंको प्रतीक नम्बर (Symbol Number) १२३४५५६७ हो भने NEB <SPACE> १२३४५५६७ टाइप गर्नुहोस् र ३१००३ मा पठाउनुहोस् र आफ्नो सबै विषयहरूका नतिजाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
आकाश एसएमएस सेवा को लागी केहि भन्नु छ भने कृपया तल टिप्पणी (COMMENT) गर्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा हाम्रो फेसबुक पृष्ठमा हामीलाई सन्देश गर्नुहोस्। आकाश एसएमएस सेवाको अलावा तपाईले NEB कक्षा ११ नतिजाहरू हेर्न विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटहरू र IVR प्रणालीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वेबसाइटहरू —NEB कक्षा ११ नतिजाहरू हेर्न
नेपाल टेलिकम एनटीसी आधिकारिक वेबसाइट र राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड (NEB) आधिकारिक पृष्ठ दुबै सबैभन्दा अग्रणी वेबसाइट हो जसले NEB नतिजा अनलाइन प्रदर्शन गर्दछ। तपाईंले परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नुभयो कि भयन भनेर हेर्न, यि वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्, र तपाईंको प्रतीक नम्बर (Symbol Number) टाईप गर्नुहोस्। साथै, तपाईं यी मध्ये कुनै पनि वेबसाइटबाट आफ्नो मार्क्सिटको (Marksheet) प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि, तपाईंले आफ्नो जन्म मिति सही ढाँचामा प्रदान गर्नुपर्छ।
IVR प्रणाली—NEB कक्षा ११ नतिजाहरू हेर्न
१६०१ डायल गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
नोट: कृपया NEB ले नतिजा प्रकाशित गरे पछि मात्र एसएमएस मार्फत नतिजाका लागि तपाईंको प्रश्नहरू पठाउनुहोस्।